कोरोनाभाइरस: कोरोना भाइरस कहाँबाट आयो, के चीनले प्रमाणहरू मेटायो? चिनियाँ डाक्टरहरूले यो दावी गरिरहेछन्
कोरोना भाइरस कोरोनाभाइरस: कोरोना भाइरस कहाँबाट आयो, के चीनले प्रमाणहरू मेटायो? चिनियाँ डाक्टरहरूले यो दावी गरिरहेछन्
Nepal Online Patrika | Source: कोरोना भाइरसको बारेमा चीनका माइक्रोबायोलोजिष्ट र सर्जन प्रो। कोक-युung युएन भन्छन् कि वुहानको प्रशासनले (कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको शहर) भाइरसको फैलावटलाई लुकायो र सबै प्रमाणहरू नष्ट गर्‍यो ताकि सत्य विश्वमा प्रकट हुन सकेन।
सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रोफेसर कोक-युन युन एक हुन् जसले वुहानको कोविड १ of को अनुसन्धानमा सहयोग गरे। रिपोर्टका अनुसार उनले भनेका थिए कि केवल साक्ष्य वन्य जीवन बजारबाट मिटिएन तर क्लिनिकल खोजमा पनि प्रतिक्रिया कम भएको थियो। यो ज्ञात छ कि यो भाइरस वुहानको यो तौल बजारबाट फैलिने बारेमा कुरा गरिएको थियो।
प्रो युनले भने कि जब हामी अन्वेषकका रूपमा हुनान मार्केट पुग्छौं, त्यहाँ केहि पनि थिएन, किनभने बजार सफा भइसकेको थियो। उनले भने कि स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई कीटाणुरहित गरेको थियो र यस अवस्थामा सबै प्रमाण नष्ट भएको थियो। यो भन्न सकिन्छ कि अपराध दृश्य नै छेउछाउमा परेको थियो। बजार पूर्ण रूपमा सफा भएकोले कोरोना भाइरस कुन जनावरको माध्यमबाट मानिसमा पुगे भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिएन।
प्रोफेसर कोक-युन यूंले भने कि प्रशासन वुहानमा केही लुकाइरहेको छ, जुन उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै शंका लागेको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूलाई यस बारे चाँडै सुचित गर्नु पर्ने थियो, तर यो गरिएको थिएन। त्यस्ता सबै लापरवाहीले केहि लुकाउन कोशिस गरिएको थियो भनेर संकेत गर्दछ।
यो थाहा छ कि अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशहरूले चीनलाई कोरोना भाइरसको सूचना लुकाउन र भाइरस फैलाउनका लागि दोष दिएका छन। चीनले यी आरोपहरूको खण्डन गरिरहेको छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा, कोरोनाको पहिलो केस चीनको वुहानमा भएको थियो, जस पछि यो भाइरस विश्वभर फैलियो।
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारका लागि नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको औषधि ‘रेम्डेसिभिर’लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रभावकारी नभएको पुष्टि गरिसकेको छ ।